Mhlawumbi uqaphele ukungahambi ngokukhawuleza kwamanani, okwenza unxibelelwano olungavamile lweentsuku, iinyanga kunye neminyaka? Ukuba akunjalo, ngokuqinisekileyo uya kumangaliswa ukwazi ukuba le nombolo imilingo idlulileyo iminyaka elishumi elinesibini. Isiqalo sesiganeko samanani afanayo safakwa ngoJanuwari 1, 2001. Umgca wokugqibela wokuvala uza kuba ngoDisemba 12, 2012. Ngenyameko nganye yamanani athembisa ukufezekiswa kweemeko ezibalulekileyo zeentlobo ezahlukeneyo. Ukususela kumhla we-07.07.07 kulindelwe iziganeko ezibalulekileyo, 06.06.06. babesaba, kwaye ngomhla we-09/09/09 kwakufuneka kuvelise inhlanhla eninzi. Akunakwenzeka ukutsho ngokungqalileyo ukuba iziprofeto zenzekile okanye cha. Wonke umntu uya kuba nempendulo yakhe kulo mbuzo. Kwabanye, bazisa ulonwabo olulindelwe ixesha elide, kunye nomntu-kuphela ukudumazeka.
Ngoko, ukungahambelani kokugqibela "kwamanqanaba" okuba ngamanani ngo-12.12.12. Yintoni esiya kuzisa ngalo mhla oqhelekileyo?
Into yokuqala ebamba iso lakho li-9, efunyenwe ngokufaka izibalo ezilula zemathematika. Ukuba sidibanisa zonke iidijithi zale mihla1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2, sifumana ngqo le nombolo. Njengoko uyazi, ezithoba, inkulu kunazo zonke zamanani eziqalo, luphawu lwempumelelo yonke. Ukuba ngumlinganiselo we-3, uguquka ukungazinzi.
Kodwa inani li-12.12.12. ibhaliwe ngokuchanekileyo, kunye nenjongo ejulile yalo mhla, kuya kubakho ukufumanisa ngokushwankathela amanani ngo-12/12/2012. Ayibonakali enhle, kodwa inika ulwazi kwinqanaba lehlabathi jikelele. Ngoku isibalo sawo onke amanani asiniki 9, kodwa 11. Le nombolo, kunye nenombolo 22, ayikwazi ukufakwa kwinombolo yokuqala. Kucaciswa kuphela kule fomu kwaye ngokwemiqathango yamanani ebizwa ngokuba yi "Master-Number".
Inombolo 11 ithi ngaloo mini ezinye izitalente ezifihliweyo ziza kubonakala kubantu, malunga nabo abangazi. Ukwenyuka kwesaziso kunye nokukwazi ukubonela phambili nantoni na nto.Uya kuvumela ukutshajongwa kwintsapho yakho kunye nehlabathi lonke.
Ukususela kulo mhla, ukufunyanwa olutsha kulindeleke kwintsimi yesayensi, iziprofeto ezintsha, izixhobo. Ezi ziphumo ziya kuphazamisa ukuphuhliswa kwazo zonke uluntu, kwaye kungekhona nje abantu abathile.
Kwakhona nenani 11 lifuzisela ukucatshulwa ngabantu abakhethiweyo bexanduva elikhulu kwikamva labantu abaninzi. Ngaloo mini, kunokwenzeka ukugqiba izivumelwano ezibalulekileyo kwaye wenze izigqibo kwizinga okanye kwihlabathi. Imiphumo yabo ingahluka. Kuyaziwa ukuba baya kuphazamisa ngokukhawuleza ukusabela kwabantu. Ingaba kuyinto engalunganga okanye efanelekileyo, ixesha liza kuxela.
Kwakhona, umhla we-12.12.12 unokukhokelela ekuqhutyweni komsebenzi ohamba phambili. Ngokomzekelo, kukho imilayezo evela kubantu ngokubhekiselwe kwe-UFOs, izitshixo ezivela kwihlabathi elifanayo, njl. Abantu abaninzi banokucinga ngale mabali njengengcamango yabantu abathandekayo. Kukho nawuphi na, wonk 'ubani unquma ukuba yintoni inyaniso kuye.
Ukuba ukhethe umtshato ngaloo mhla, qaphela ukuba uthando phakathi kwezi zibini ziza kunqoba. Oku kungakhokelela kwiimeko ezinzima emva komtshato. Kungekudala okanye emva koko i-romantic mood iya kutshabalala, kwaye abantu banokuqonda ngokukhawuleza ukuba abananto encinane kunye kunye nesitampu kwiipasipoti zabo abazidibanisi nantoni na.
Ngokutsho kwesinye isithethe senani, ukuba uzisa umhla we-12.12.2012 ukuya kwinani eliphambili, sithola inombolo 2. Inentsingiselo eyahlukileyo kwaye ayithembisi nayiphi na imicimbi ebalulekileyo. Kodwa ngokuqhelekileyo i-Master Number, njengenani le-2, lichaphazela abantu ngenye indlela.
Ngoku khawuqwalasele lo mhla ukusuka kwindawo yokujonga ngayo izithethe zamanani, oko kukuthi-ukubaluleka kwalo mhla kwiArntana Tarot. Nantsi inombolo 11, ehambelana ne-12.12.12., Inentsingiselo engathandekiyo. Ngokweminye idatha "inombolo ye-ordinal" ye-Arkan ye-Force. Ezinye izithethe zibonisa ukuba unxulumene no-Arkane Justice (Justice). Ukuchazwa ngalunye kuchaza ukuba kukho imicimbi ethile.
Ngakolunye uhlangothi, i-Arkan Sila iyakunceda ukujamelana nayo yonke imiba enzima kwaye ichithe imini kakhulu. Kodwa ukuphumeza iziphumo ezilungileyo, kuya kufuneka unqobe ubunzima obunzima. Abaninzi baya kufumana iziphumo eziphezulu ekusebenzeni kwabo, kodwa okokuqala kufuneka bakhuphe.
Ukongezelela, ifuzisela ukutsaliswa kwimihlali yenyama kunye namandla esondo. Musa ukuzithoba kwizilingo, ngaphandle koko awukwazi ukuphepha iingcambu ezingcolileyo, ukusuka kwinqanaba labantu abafuna ukuguqula.
Kwakhona, mhlawumbi kuya kufuneka unike into enokubiza kunye nekhethekileyo ngenxa yegosa eliphezulu. Ngenxa yoko, oku kuya kutshintsha kakhulu ubomi bakho bokuphila. Utshintsho olunjalo olubalulekileyo aluyi kubonakala ngo-12.12.12, kodwa isiqalo siya kubeka ngalolo suku.
Kwakhona ngo-12.12.12. mhlawumbi naluphi na ubonakaliso lwentlalo-ntlalontle, imibhikisho, imfesane okanye ininzi yemitshato, ebangelwa ukungabonakali kwalo mhla.
Justice Arkan (Justice)
Ngokwe-Arcana Justice, kulolu suku kuyimfuneko ukuyeka izivumelwano ezilindelekileyo, njengoko zinokuba nemiphumo emibi kwaye zigqitywe kwiinkqubo zenkundla. Ngako oko, ngaphambi kokuba usayine nawaphi na amaphepha, cingisisa malunga noko kunokukukhokelela.
Ukuba ngaphambili ulahlekelwe yilahleko kunye nokuzimela, ke kukho amathuba amakhulu ukuba ngaloo mini uya kufumana inzuzo yemali ngokukhawuleza. Kwakhona uya kuhlawulwa amatyala, ungayifumana imbuyekezo okanye inkxaso.
Ngaloo mini, abaninzi baya kuba nethuba lokuvakalisa uluvo lwabo ngokuvulekileyo. Urhulumente akayi kuthoba kunye nokwamkelwa kwezigqibo eziza ku boniswa ngandlela-thile yokuba zisebenza kuphela kwiminqweno yabantu.
Abanye abantu abangayixhasi imibono yesininzi banokuthi "bavukele" ukubonakalisa ilungelo labo lokuzimela nokuzimela. Mhlawumbi ukubonakaliswa kobugwenxa nokunganeliseki ekuphenduleni ezinye izigqibo zikaRhulumente ezingazilungisi isigqibo.
Ezifanelekileyo kwaye azikho imicimbi kwaye utshintsho kwisithembiso sokuphila "onoyolo" ngomhla we-12.12.2012. Akuboni ukuba iziganeko ezichazwe ngamasiko ahlukeneyo ahlukeneyo zineenkalo ezahlukeneyo, zifaka ingqinelana ngendlela efanelekileyo malunga neengozi zezivumelwano ezingenakulungelelaniswayo, intlalo yoluntu kunye nokuzibonakalisa, ukufumana ithuba lokuvula iitalente kunye neetalenta, isidingo sokushiya into ngenjongo yokuphila kakuhle kwixesha elizayo .
Ngaloo ndlela, izithethe ezahlukeneyo zithetha malunga nokuba kukho imicimbi enye. Ngaba yinto engafanelekanga okanye umhla 12.12.12. Ngaba unomnye uhlobo "lomlingo" kwaye uza kusizisa ngokufumana amatsha namathuba? Kuye kuwe. Ngaloo ndlela okanye ngenye indlela, ixesha liza kufaka onke amachaphaza phezu kwe "kwaye" kwaye uyazikhethela, kulungele ukukhawula izibikezelo kwaye unike iinombolo ezikhethekileyo, mhlawumbi nentsingiselo ye-sacral. Kuhlala nje ukulinda ekuseni kaDisemba 13, xa yonke into icacile.
I-horoscope ye-Personal for 2010 ye-Scorpion ibhinqa
UEfim Shifrin wayemthanda umdlalo wezemidlalo, isithombe esivela ku-Instagram
Njani ukuhanjiswa, iintlobo kunye neengxaki?
Indlela yokuzonwabisa ngeendwendwe: Imibuzo, ukhuphiswano
Imvana ephusiweyo ene-vegetable shashlik
Kuliphi ixesha elingcono ukunika umntwana inkulisa?